Ciyaaraha AppImage: Halkee laga helayaa Ciyaaraha AppImage badan? | Laga soo bilaabo Linux
Ciyaaraha AppImage: Halkee laga helayaa Ciyaaraha AppImage badan?
Sidaan aragnay, galkeena hore ee ladhaho "Counter Strike 1.6: Sida ugufiican ee loogu ciyaaro FPS-kan GNU / Linux!", rakibi barnaamij shaqo ama ciyaar qaab ".AppImage" badanaa waa a kale (xal) aad uga faa iid badan kana waxtar badan kuwa kale, markii aan lagu darin si ku-meel-gaadh ah bakhaaradayada GNU / Linux Distros.
Sidaa darteed, gelitaankii la yiri waa la faaleeyay, feyl ayaa la helay oo loo adeegsaday "Qaabka AppImage" laga bilaabo a Kanaalka Telegram. Iyo inkasta oo, Kanaallada Telegram iyo Kooxaha Badanaa waxay aad ugufiicanyihiin hagaajinta arjiga iyo feylasha ciyaarta, waxa ugufiican ilaa iyo hada waa in laheli karo websaydhada leh shaqooyin isku mid ah, taas oo ah, inay kujiraan madadaalo iyo xiiso Ciyaaraha ku jira «.AppImage format».
Counter Strike 1.6: Sida ugu fiican ee loogu ciyaaro FPS-kan GNU / Linux!
Kuwa xiiseynaya sahaminta waxay yiraahdeen daabacaad faallo ah oo la yiraahdo "Counter Strike 1.6: Sida ugufiican ee loogu ciyaaro FPS-kan GNU / Linux!" Waad sahamin kartaa tan iyo kuwa kale ee la xiriira, adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha hoose:
"Xaqiiqdi, "Counter Strike 1.6" Ma ahan bilaash mana furna, laakiin markay tahay la ciyaarida asxaabta maanta, iyo gaar ahaan kuwii hore, waxaan awood u yeelan karnaa inaan iska indhatirno, daqiiqad wadaag ah caafimaad, oo aan la isticmaalin Ciyaar bilaash ah oo furan, inkasta oo ay jiraan kuwa badan iyo fiican in ay jiraan, sidaan horeyba ugu sheegnay daabacado kale oo hore oo laxiriira."
XtraDeb: Bakhaar aad u fiican oo PPA ah oo ah barnaamijyada iyo ciyaaraha Ubuntu
Steam: Bulshada, Bakhaarka iyo Macaamiilka Ciyaarta ee GNU / Linux
Itch.io: Waa suuq furan oo loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga oo lagu taageerayo GNU / Linux
GameHub: Maktabadda mideysan ee dhammaan cayaarahayaga
1 Ciyaaraha AppImage: Websaydhyada Soo Degsada Faylka AppImage
1.1 Maxay yihiin boggaga internetka ee faylka barnaamijka 'AppImage' ee hadda jira?
1.1.3 Xariirka Ciyaaraha Linux
1.1.4 Linux-Apps.com (Ciyaaraha AppImage)
Ciyaaraha AppImage: Websaydhyada Soo Degsada Faylka AppImage
Maxay yihiin boggaga internetka ee faylka barnaamijka 'AppImage' ee hadda jira?
Markaa waan soo sheegi doonaa 4 degello xiiso leh, waxtar leh oo wax ku ool ah kaas oo qof kastaa si fudud ugu geli karo raadinta, soo dejinta iyo rakibidda nooc kasta oo barnaamij ah, iyo gaar ahaan Juegosee qaab «.AppImage format»:
Websaydhkani wuxuu ka kooban yahay buug-yahan ka badan 100 barnaamij oo qaabka .AppImage ah, wuuna sii korayaa. Barnaamijyada AppImages waa barnaamijyo kaligood taagan oo si fudud loo soo dejisan karo oo loogu shaqeyn karo qaybinta Linux kasta. Isdhexgalka wanaagsan oo fudud, waa la soo dejisan karaa lana isticmaali karaa AppImageLauncher.
Websaydhkani waa farsamo ahaan App Store ee Ururka abuuray xirmada AppImage, taasi waa, AppImage.org.
Xariirka Ciyaaraha Linux
Websaydhkani wuxuu xirxiraa oo u qaybiyaa ciyaaro waaweyn oo Linux ah sida la qaadi karo, baakado iskood u kooban oo ka shaqeyn kara ama ka shaqeyn kara nidaam kasta oo Linux ah. Waxay isticmaashaa qaabka xirmada AppImage, iyo xoogaa sixir qoraal ah.
Linux-Apps.com (Ciyaaraha AppImage)
Websaydhkani wuxuu leeyahay qayb ka mid ah Ciyaaraha, qaabab badan oo ay ka mid yihiin AppImage. Taasi waa, waxay mas'uul ka tahay xirxirida iyo qaybinta codsiyada iyo ciyaaraha waaweyn ee Linux sida baakado la qaadan karo iyo kuwo iskood u kooban kaas oo ka shaqeyn kara ama ka shaqeyn kara nidaam kasta oo Linux ah. Waxay isticmaashaa qaabka xirmada AppImage, iyo xoogaa sixir qoraal ah.
Intaa waxaa dheer, waa qayb ka mid kale oo weyn oo si fiican loo yaqaan loo yaqaan Xakamaynta, taas oo iyaduna, qayb ka ah opendesktop.org. Pling waa qaybta Bakhaarka, oo abuureyaashu ay ku daabici karaan wax soo saarkooda iyo waxyaabaha bilaashka ah isla markaana ay ku heli karaan magdhow yar markasta oo badeecad la soo degsado ama la arko muuqaal dhexdhexaad ah, oo ku xaddidan xaddiga tabarucaadka loo heli karo qayb kasta.
Haddii qof kale yaqaan qof kale degel xiiso badan, waxtar leh oo wax ku ool ah isla ujeeddada ama waxqabadka, waxaan uga tagnaa magaceeda, faallooyinka daabacaadan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan waxa boggaga internetka jira si aad u raadiso oo u soo dejiso Ciyaaraha gudaha «formato .AppImage», sidaas rakib oo ciyaar si fudud kuwa aan jecel nahay una adeegno; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Hada, hadaad jeceshahay tan publicación, Ha 'joojin la wadaag kuwa kale, websaydhada aad ugu jeceshahay, kanaalada, kooxaha ama bulshooyinka shabakadaha bulshada ama nidaamyada farriimaha, ugu doorbidid bilaash, furfuran iyo / ama ammaan badan sidii telegraam, signal, Mastodon ama mid kale oo ka mid ah Isuduwaha, doorbidayaa
Xusuusnowna inaad ku booqato boggayaga hoyga at «Laga soo bilaabo Linux» si aad u sahamiso warar dheeri ah, iyo sidoo kale inaad ku biirto kanaalkayaga rasmiga ah ee Telegram ka FromLinux. Halka, wixii macluumaad dheeraad ah, aad booqan karto mid kasta Maktabadda internetka sida OpenLibra y JEDIT, si loo helo loona akhriyo buugaagta dhijitaalka ah (PDF-yada) mawduucan ama kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ciyaaraha AppImage: Halkee laga helayaa Ciyaaraha AppImage badan?
Tim Berners-Lee wuxuu xaraashaa koodhka asalka asalka ah ee www